Waa maxay lakabka xuduudu? | Saadaasha Shabakadda
Heerka koowaad waxaa sida caadiga ah laga aqoonsan yahay halka loo yaqaan 'troposphere', oo lagu qeexay saameynta juquraafi ahaan juqraafi, kaas oo loo yaqaan lakabka xadka meeraha. Waxaa ku badan isku-darka hawo-mareenka, oo ka dhashay khilaaf joogto ah oo salka dhulka ku haya iyo soo-gaadhista xumbada hawada marka la kululeeyo.
Lakabkaan waxaa si caadi ah loogu xilsaaray a dhererkiisu yahay 600 illaa 800 m, laakiin waxay u dhaxeysaa dhowr tobanaan mitir illaa hal ama laba km, iyadoo kuxiran arrimo kaladuwan oo kala duwanaan ah, culeyska dusha sare, dabeecadda daboolka dhirta, xoojinta dabaysha, heerka kululaynta ama qaboojinta carrada, kuleylka kuleylka iyo huurka, iwm. Inta lagu jiro maalinta, tabaruca kuleylka iyo isku-dhafka toosan ee hawadu waxay kordhisaa dhumucda lakabka xadka, kaasoo gaara dhererkiisa ugu sarreeya galabtii hore; taas cakiskeed, habeenkii qaboojinta carradu waxay ka hortagtaa buuqa oo dhumucdiisuna way yaraataa.
Mararka qaarkood, marka lagu daro, qaabdhismeedka toosan ee lakabka xadka ayaa suurtagal ka dhigaya in la kala saaro heerar dhowr ah:
1) a lakabka laminar kelli, marka lala xiriiro dhulka, qiyaastii xoogaa milimitir qaro weyn ah, oo ay ku badan tahay saameynta nafwaayaha dusha sare;
2) markaa a lakabka kacsan dhowr tobanaan mitir oo dherer ah, oo lagu gartaa kacsanaanta daran ee hawada; iyo
3) heerka sare, halkaas oo Coriolis uu ku xoogsado dabaysha, oo la yiraahdo cape ekman.
Horeyba wuxuu uga sarreeyaa meesha loo yaqaan 'troposphere' bilaashka ah, oo leh hawo nadiif ah oo ka cufan yar, halkaas oo heerkulku hoos ugu dhaco celcelis ahaan 6 ºC / km.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay lakabka xuduudu?